Hay’addaha Gargaarka oo Ka Digaya Macluul Ka Dilaacda Gobolka Tigray | Gabiley News Online
In ka badan 350,000 qof oo ku nool gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, ayaa waxaa haysta xaalado macluul, iyadoo malaayiin kalena ay halis ku jiraan, sida lagu sheegay qiimayn ay sameeyeen hay’addaha Qaramada Midoobay iyo kooxaha gargaarka kuwaas oo ku eedeeyay iska horimaadka musiibadii ugu xumayd ee cunno muddo toban sano ah.
Wakaaladda wararka ee Reuters, ayaa ku warrantay in madaxa gargaarka Qaramada Midoobay Mark Lowcock uu sheegay shalay in macluul ay ka jirto gobolka Tigray.
Waxaanu sheegay in tirada dadka ku jira xaaladaha macluushana ay ka badan tahay meel kasta oo adduunka ah, daqiiqad kasta tan iyo markii rubuc milyan Soomaali ah ay naftooda ku waayeen sanadkii 2011 kii.
5.5 milyan ee shacabka Tigray, ayaa badankoodu waxay u baahanyihiin gargaar cunno.
Colaada gobolka oo bilaabantay bishii November taas u dhaxaysay ciidamada Ehiopia oo garabsanaya kuwa Eritrea iyo kuwa jabhada TPLF, ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof, iyadoona ku qasabtay laba million oo qof in ay ka qaxaan guryahooda.